Dum Alligator: àgwà na nkọwa nke Crocodile dịgasị iche iche, nwere ike ikwu maka ịkụ mkpụrụ, gụnyere mkpụrụ osisi, yana foto nke elu - Akwukwo nri - 2020
Atụmatụ na njirimara nke di iche iche Alligator. Atụmatụ na-eto eto na ndụmọdụ ndị ọzọ bara uru
Ụdị dịgasị iche iche dị iche iche bụ ndị na-ewu ewu n'etiti ndị na-eto ndụ n'oge okpomọkụ n'ihi ọtụtụ ihe kpatara ya: ọ bụrụ na ọ dịchaghị mkpa na nlekọta, mkpụrụ osisi dill dị ngwa ngwa, a na-ahụ ya site na mkpụrụ dị elu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa.
Njirimara ya bara uru na-enye gị ohere ịnagide ọrịa dịgasị iche iche nke mmadụ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe dị iche iche nke ọtụtụ osisi Alligator, uru na nsogbu nke osisi ahụ, iji ya mee ihe na nkà mmụta ọgwụ.
Ị ga-amụtakwa banyere iwu nke ịkụ ihe, na-eto ma na-elekọta ụdị dịgasị iche iche n'ụlọ na n'ọhịa, owuwe ihe ubi na owuwe ihe ubi.
Akụkọ na ọdịdị ala nke nkesa
Uru na nkwenye nke iri nri
Na-eto site na mkpụrụ na seeding
Mepee ogige ubi
Ọ dị mkpa ka ị nọrọ n'ụlọ
Nkọwa nke ụdị, njirimara na foto
Bush fennel nke dịgasị iche iche bụ nke oge na-eto eto., owuwe ihe ubi ya nwere ike wepu ya ọtụtụ ugboro kwa oge. N'elu anya, Alligator bụ obere osisi shrub, 25-40 cm n'ogologo, n'ogologo. Mgbe ụfọdụ, osisi shrub nwere ike karịrị 100 cm. A na-ekpofu ahịhịa na-acha anụnụ anụnụ.
Oge ripening oge nnu bụ ụbọchị 40-45 - elu, ụbọchị 115, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa maka ngwa nri.
Ezigbo chernozem nke na-adọrọ adọrọ kacha mma maka onye ọ bụla, ma n'ala ọzọ ọ nwere ike inye ezigbo owuwe ihe ubi. Uru ọzọ nke Alligator bụ iguzogide okpomọkụ. O kwere omume ịgha mkpụrụ nke okpukpu abụọ nke okpukpu abụọ n'afọ: na mbubreyo n'oge mgbụsị akwụkwọ nakwa ná mmalite oge opupu ihe ubi.
Onigator Dill gosipụtara ekele site na ụlọ ọrụ "Gavrish". Ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ agrarian nke Moscow na-azụlite ụdị dịgasị iche iche na 1999. E tinyere ya na Ndenye Mba nke Mmezu Nzube na 2002.
N'ihi enweghị nchekasị na ala na ikuku ikuku, nnukwu Alligator nwere ike itolite na mpaghara nile nke Russia.
Dill bụ ihe bara uru ma dị mfe na-eji oge a hụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụla tebụl. Ọhụrụ elu nwere mmetụta dị mma na:
ọdịmma mmadụ n'ozuzu ya;
ọrụ nke tract gastrointestinal;
enyere aka na isi ọwụwa.
Ma, ọ gaghị ekwe omume ịsị n'eziokwu na mmadụ niile nwere ike iburu ihe ọ bụla. Ngwunye Nile nwere ọtụtụ vitamin ndị bara uru na ndị dị mkpa maka ụmụ mmadụ, ma ị kwesịrị ịgbaso ụdị nri nke anụ ahụ kwa ụbọchị, karịsịa maka ndị nwere ọbara mgbali elu.
Onye na-ekpuchi ihe niile na-egbuke egbuke nwere diuretic, antioxidant, bactericidal, choleretic, mmetụta antiseptic n'ahụ mmadụ. Ngwurugwu na-enye aka wepụ nsị na ime ka ahụike zuru ezu..
Ọ bụrụ na a na-agụnye dil n'ime nri mmadụ, mgbe ahụ, elu a:
eme ngwa ngwa mmepụta nke enzymes dị mkpa maka afọ na mmiri gastric;
normalizes tract gastrointestinal;
bara uru maka colitis na gastritis.
Ngwunye Alligator na-enwekwa mmetụta na-emetụ n'ahụ n'ahụ mmadụ. - na-ebelata mgbakasị, isi ọwụwa na nchegbu ụjọ. Ihe di iche iche nke dill, site n'iji usoro ihe eji eme ihe na ojiji nke ihe ndi ozo sitere n'osisi ahu, wepuo aru ahu karia ihe ozo. Mkpụrụ nke Dill Alligator na elu ha ga-enyere na ume ume. Dill na-ebibi ngọngọ n'ọnụ.
Nkọwa nke ọdịda nke nnụnụ agu:
Na oge opupu ihe ubi, ị nwere ike ịgha mkpụrụ osisi Diga Alligator ozugbo ọ na-agba. Osisi na osisi n'onwe ya na-eguzogide ntu oyi, ọ nwere ike ịnagide obere okpomọkụ.
Ala ekwesịghị ikpo mmiri. Maka ịgha mkpụrụ na saịtị ị chọrọ ịhọrọ ebe kwesịrị ekwesị. N'agbanyeghi na otutu Alligator bu ihe di egwu na ihe siri ike, ihe di mma ga-abu uzo nke nkpuru elu.
Aro maka ịhọrọ saịtị na-ebute:
saịtị ahụ kwesịrị ịdị mma nke ọma ogologo oge - ọ bụghị na ndò nke ụlọ ahụ;
ịkwesighi ịgha osisi Alligator na ebe ndị carrots, fennel na osisi ọgwụ ndị ọzọ na-eto eto;
Achịcha na pasili agaghị akụ ya ọzọ;
ezi maka ụdị Alligator ga-abụ ala nke ebe a na-akụ n'ubi ndụ na ndị na-eto eto.
Eji akwa akwa akwa dị 15 cm. Mkpụrụ na-enịm ke ala ka omimi 0,5 cm ke increments nke 1.5-2 cm.
Mgbe ịghaghaara ihe ndina ahụ, mkpụrụ kwesịrị ịda n'ụra na ngwakọta nke peat na humus, 2-2.5 cm nke ukwu na tamped. Enweghị nsogbu na ịgha mkpụrụ, ma ọ bụrụ na ị gaghị ebipụ ụbụrụ nke pụtara n'oge oge na-eto eto.
Onye na-ekpuchi ihe niile ga-azụlite onwe ya - Mkpụrụ ahụ ga-ada n'ala, n'afọ ọzọ ga-abụkwa osisi nke elu ala.
Ụdị dịgasị iche anaghị achọ nlekọta a kapịrị ọnụ na nlekọta. Maka ezigbo owuwe ihe ubi, gbasoo iwu ole na ole dị mfe.
Dill Alligator chọrọ ịgbara ọ dịkarịa ala 1-2 ugboro n'izu (maka 1 sq. Mita 5 lita mmiri).
A dịghị achọ nri, nanị nri kwesịrị ekwesị maka ịba ụba na-eri ala tupu ị kụọ.
Dill mkpa ahihia, wepu ala ma wepu ata ah u na nhazi mbu. Mgbe mkpụrụ nke ụdị dịgasị iche iche na-arụpụta 3-4 epupụta, ọ na-amalite na-arụsi ọrụ ike, na na nke a, ata ahụ agaghị egbochi ya.
Chọpụta Alligator dị mma maka ịkụ ụlọ. Ala ubi dị mma jikọtara ya na ala na-anọpụ iche maka osisi ndị dị n'ime ụlọ. Igbe ahụ na-abata kwesịrị ịdị ogologo oge iji kwe ka dill zụlite.
Tinye drainage drainage na ala nke ite ahụ.
A na-akụ mkpụrụ n'okpuru, n'enweghị oghere.
Elu nwere ike jupụta n'ala.
Ọ dị mkpa ka ehicha ụwa ma tinye igbe ahụ n'ọchịchịrị na ebe dị ọkụ, mgbe izu ole na ole gaferekwa ya na sill window.
Dill - omenala ima-nmaya mere, na oyi, ọbụna na windowsill, dil ga-achọ ka ìhè ọzọ na ọkụ fluorescent ọ dịkarịa ala awa ise n'ụbọchị.
Dill kwesịkwara ịṅụ mmiri kwa ụbọchị, ma a pụghị ịwụsị osisi, izu ole na ole ọ bụla - fertilizing na fatịlaịza dị mgbagwoju anya. Mkpụrụ nwere ike tupu tinye na potassium permanganate. Elu nke mbụ na nlekọta kwesịrị ekwesị ga-apụta n'otu ọnwa. Naanị ị ga-egbutu alaka ụlọ.
Oge mmepụta vegetative nke dil bụ obere. Maka owuwe ihe ubi ohuru, odi mkpa ka i mee ubi ohuru.
Onye ọ bụla na-achọ ka onye ọ bụla na-achọ ka ọ ghara ịna-arịa ọrịa.
Ọkara na-eguzogide ọgwụ na powdery mildew. Ka m nweta ọrịa na njedebe oge okpomọkụ. Osisi ndị nwere nsogbu nwere ihe nchekwa dị ọcha na ị ga-esi na ya.
Ọtụtụ mgbe Alligator na-ata ahụhụ si fusarium (wilt). Ihe kpatara ya nwere ike ịbụ okpomọkụ dobe. Iji chebe osisi ahụ, mkpụrụ tupu akuku kwesịrị itinye ya na ngwọta nke potassium permanganate ma ọ bụ phytosporin.
N'ọtụtụ ikpe, osisi ahụ nwere ike ịnata ahụhụ.. N'okwu a, osisi ahụ na-ekpuchi aja aja na ha kpochapụrụ. Mgbochi nke ọrịa a ga-abụ ọgwụgwọ akwa na ngwọta nke Fundazole na spraying osisi na ngwọta nke boric acid ugboro abụọ na oge.
Mkpụrụ mbụ nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na nkezi, egbute 30-40 ụbọchị mgbe akuku. Ụfọdụ ndị na-elekọta ubi na-eme nchịkọta nhọrọ, ndị ọzọ - siri ike. Ihe kachasi uru na anụ ahụ na-aba uru dị elu, ihe dị ka cm ise n'ogologo. Ọ bụrụ na a naghị anakọta elu na oge, mgbe ahụ, a ga-ebipụ osisi ahụ n'ụzọ zuru ezu, ma ọ bụghị nke ahụ, ihe ga-eme ka ọdịdị ahụ gharazie ịla.
Ntucha nlekọta, nlebara anya na àgwà ndị mara mma nke Alligator dị iche iche emeela ka ọ bụrụ otu n'ime osisi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'etiti ndị ọrụ ubi. N'ihi nguzogide oyi ya, o nwere ike itolite na Russia, ọbụna na mpaghara ugwu.